အိမ်မှာ7remÃ¨desသဘာဝကျကျâ Cutana မှို©အီးမှသက်သာရာရစေရန်€ "Ama © Liore သင့်ရဲ့စန်တာ© - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစားa"သဘာဝကျကျâမှို Cutana ©အီးမှသက်သာရာရစေရန်7remÃ¨desအိမ်မှာ€" Ama © Liore သင့်ရဲ့စန်တာ©
7 အိမ်မှာကုစားသဘာဝကျကျအသားအရေမှိုသက်သာရာရစေဖို့ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
မှို Cutana ©အီးကြောင်းနိုင်ပါတယ်apparaÃ®tredonâ€™ကိစ္စရှိရာခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်မည်သည့်အသက်အရွယ်တစ်¢မှာဖန်းဂတ်စ်အသားအရေပိုးကူးစက်မှုသည်။ သို့သျောလညျး ဒါဟာဦးရေပြား, ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ Ga © nitaux သို့မဟုတ်လက်သည်း, အထူးသဖြင့်ခြေကိုရှာဖွေဖို့ပိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၌ရှာဖွေတွေ့ရှိ သဘာဝကျကျဖန်းဂတ်စ် Cutana © es မှသက်သာရာရစေရန်7remÃ¨desအိမ်မှာ။ ကျနော်တို့€™ Da €™donâသူတို့ကိုမဆိုရှေးခယျြသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်နှင့်efficacitÃ©ရဖို့ရန်သူတို့ကိုပြောင်းဖို့နိုင်ပါတယ်။
မှို Cutana ©အီးဆန့်ကျင်RemÃ¨des
1 ။ Da €™မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံလက်ဖက်ရည်သစ်ပင်တစ်ဦး©
LA €™ Da €™မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံလက်ဖက်ရည်သစ်ပင်တစ်ဦး©€™၏တစျခုဖွစျသညျ လူကြိုက်များသောremÃ¨des မှို Cutana ©အီးဆန့်ကျင်။ တကယ်တော့ဒါဟာ€™ Da €™လက်ရှိဝင်ငွေအတွက် Ingra © dient ဖြစ်ပါတယ် SA tick © Cosma ထုတ်ကုန် သဘာဝအများနှင့် handcrafted €™©ဝက်ခြံဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ရန်နှင့်ဘောက်နှင့်များ၏ကုသမှုထဲမှာ candidiasis သို့မဟုတ် cystitis.
ကြည့်ရှုရန်: လိင်ပြီးနောက် Cystitis
ဤသည်စင်ကြယ်သောရေနံကအရမ်းနာကျင်ကျိန်းစပ်စေနိုင်ပါတယ်; ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကချွဲအမြှေးပါးသို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံဒေသများအတွက်၎င်း၏လျှောက်လွှာကိုရှောင်ကြဉ်©a။ ဒါဟာအစလုပ်နိုင် €™အုန်းသီးဆီထဲမှာမှေးမှိန်တစ်ဦး©လည်းများလွန်းအားကြီးသောဖြစ်ခြင်းမရှိပဲ propria ©© s ကို antifungal ခဲ့ပိုင်ဆိုင်ဘယ်။
2 ။ Da €™မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ oregano
အဆိုပါမွှေးကြိုင်စက်ရုံ Da €™ oregano ထံမှထုတ်ယူကြောင်းယင်း၏ propria ©©့ခဲ့ပဋိဇီဝဆေးနှင့် antifungal များအတွက်နောက်ထပ်အလွန်ထိရောက်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ။ ITA €™အလွန် Remade ©ဘို့ညွှန်ပြ rattle Ga © Na ©ဖြစ်ပါသည် ပါးစပ်အသုံးပြုခြင်းကိုနေသမျှကာလပတ်လုံး€™á©ထုတ်ကုန်တံဆိပ်အဖြစ်ကောင်းစွာ La €™ဖော်ပြသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ €™ Da €™မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံလက်ဖက်ရည်သစ်ပင်တစ်ဦးနှင့်အတူပေါင်းစပ်© ပေါင်းစည်းထား©€™ရယ်မော၏ကုသမှုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်€™ Inga © rer ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီဆီတစ်စက်ယူ ©အီး3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း© Da €™ရေနံသို့မဟုတ်ပျားရည်ထဲမှာရော.
3 ။ ဂျင်း
ဂျင်းစန်တာ©တစ် Remade မျိုးစုံပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့က၎င်း၏အာဏာကို Da €™á©အလေးပေးဖယ်ရှား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ Bacta © ries နှင့်ထိရောက်သောmaniÃ¨reမှိုအချို့အမျိုးအစားများ.
ငါတို့သည်ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံသို့မဟုတ် PRA © parry အခြေစိုက်စခန်း Da €™ပြုတ်ရည် Concentra ©အီးဂျင်းမှာရေချိုးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒီအခွေသညျးပေါ်တွင်ပေါ်လာကြောင်းမှိုဆက်ဆံဖို့အလွန်အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လတ်ဆတ်တဲ့အသီးဖျော်ရည်လျှောက်ထားကိုလည်း©a။
4 ။ propolis
La propolis PRA ©များအတွက်အကောင်းဆုံးသဘာဝအပဋိဇီဝဆေးများ၏€™တဦးတည်းအားလုံးအမျိုးအစားများ Da €™ကူးစက်မှုလာနှင့်ပြုမူဆက်ဆံသည်။ ထို့အပြင်မှာ, ITA €™အဆိုပါ€သောကွောငျ့, မှိုဖယ်ရှားပစ်လည်း©တစ်ဦး©မှာအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်™Ingra ©©အုံစတီရီယို© rile စောင့်ရှောက်ဖို့ပျားအသုံးပြုသော dient.
ကျနော်တို့ propolis နှင့်အတူပါးစပ်နှင့်လိမ်းကုသမှုပေါင်းစပ်နိုင်သည်
Topic: အဆိုပါဧရိယာတိုက်ရိုက်လျှောက်လွှာ©အီးထိမိခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အရက်မပါဘဲတစ်ဦး propolis ကိုရွေးချယ်အကြံပြု
ခံတွင်း:53 mycosis © Cutana ၏€™áပျောက်ဆုံးသည်အထိတိုင်းနာရီပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ တစ်€ PRA © ventive ခေါင်းစဉ်, ကျနော်တို့5တစ်နေ့တစ်ကြိမ်အစာရှောင်တတ်သောမှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ယူနိုင်ပါသည်
5 ။ Ceylon သစ်ကြံပိုး
La သစ်ကြမ်းပိုး တစ်ဦး©ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေများ၏အရသာ enriches ကြောင်းအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ITA €™á©တစ် Ingra ©သဘာဝကဆေးဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီရိုမှမရှိမဖြစ် dient လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, niacin, thiamine နှင့်အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်၎င်း၏အကြောင်းအရာကအလွန်ထိရောက်သော fungicide စေသည်.
ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်သစ်ကြံပိုး၏€™မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံသို့မဟုတ် PRA ©ဂျင်းနှင့်အတူသကဲ့သို့, ရေချိုးခန်းဆင်ယင်ခြယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း AMA ©များအတွက်တစ်ဦး©တစ်ဦး©2အစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းတို့၏ curative သက်ရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့အမြဲတမ်းဖြစ်သော Ceylon သစ်ကြံပိုး, ကနေရှေးခယျြဖို့အာမခံပေးရမည် © Varia Ma © dicinale ©ခဲ့.
6 ။ ကြက်သွန်ဖြူ
က sa €™€™တစျသောကွောငျ့ La €™ကြက်သွန်ဖြူ, မှို Cutana ©အီးဆန့်ကျင်ဤစာရင်းတွင်remÃ¨desထံမှပျက်ကွက်မဖွစျနိုငျ အာဏာအရှိဆုံးပဋိဇီဝဆေးနှင့် antifungal အကောင်းဆုံးယခုအချိန်တွင်၏လူသိများ။ ငါတို့သည်လည်းယင်း၏တိုက်ရိုက်စားသုံးမှုမှာ© application ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် "သင်စားကိုအကုန်ကျလျှင်, ငါတို့သည်ဝယ်နိုင် Da €™တောင့ကြက်သွန်ဖြူနံ.
လိင်အင်္ဂါတစ်ဦးသွား Da €™ကုန်ကြမ်းကြက်သွန်ဖြူမိတ်ဆက်မှာပါဝင်သည်ဟုဖန်းဂတ်စ်အင်္ဂါဇာတ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စပ်စုကုသမှုရှိပါသည်။ နှစ်စဉ်ထုတ်ပေးငွေများလုပ်ဖို့©faÃ§onsကွာခြားကျနော်တို့စာတစ်စောင်မှညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်ရှိပါတယ်။ Remade အထူးသဖြင့် candidiasis ကုသမှုအတွက်အလွန်ထိရောက်သောကြောင်း။
7 ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ် ဒါကြောင့်အများအပြားဖြေရှင်းချက် Da €™အရေးပေါ်စန်တာ©©နှစ်စဉ်ထုတ်ပေးငွေများအခြေအနေများကွာခြားပေးသွားမှာပါအဖြစ်, အိမ်မှာရှိသည်ဖို့အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ITA €™ဟာအလွန်လက်တွေ့ကျ Ingra ©ကိုသဘာဝထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ် dient နှင့်အိမ်လုပ် Cosma ©လူမိုက်ကံကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှားစောင်းလက်ပတ်€™ PRA ©ယင်း၏၏ကြီးစွာသောအားသာချက်ခံစားရတယ် ဂျယ်လ် textureစက်ရုံ၏ကျွန်တော်တို့ဟာ extrayions ကြောင်းသို့မဟုတ်ငါတို့ခွင့်ပြုပါကဝယ် လျင်မြန်စွာနှင့်လက်တွေ့လျှောက်လွှာ။ မဆီပြန်အသားအရေအရွက်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစုပ်ယူကြောင်းတစ်ခုဆီမှေးမှုကြောင့်လည်းအခြားအဆီတွေနဲ့ဖော်စပ်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
onychomycosis ပပျောက်ဖို့5မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ
Onychomycosis သင့်ရဲ့လက်သည်း၏ဂုဏ်အသရေဘို့အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်, ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများတွေ့ရှ။ Read more »